Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo sheegay in meel wanaagsan uu marayo xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya – Walaal24 Newss
April 15, 2019	0	By walaal24
Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay SONNA ayaa ka hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, Ganacsiga, mashaariicda Shiinaha uu ka fuliyay Soomaaliya, horumarada la gaaray iyo arrimo kale oo badan.
Mr. Qin Jian: ayaa marka hore wareysigiisa ku sheegay in Shiinaha iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir saaxiibtimo in ka badan 600 sano ka hor, wuxuuna sheegay in caasimadda Muqdisho ay ku tallaabsatay horumar ganacsi oo la taaban karo.
“Tan iyo markii dhidibada loo taagay xiriirkii diblomaasiyadeed 1960-kii, xiriirkeenu wuu sii adkaanayay lana jaan qaadayay hadba isbeddelada markaasi jira, waxaan gaarnay natiijooyin wax-ku-ool ah oo ku saabsan siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada,cayaaraha, tiknoolajiyada, daryeelka caafimaadka iyo waxyaabo kale oo badan. Laga soo bilaabo 1960 ilaa 1991, Dawladda Shiinaha waxay 89 mashruuc ka fulisay Soomaaliya oo ilaa iyo hadda laga xusi karo Garoonka Kubadda cagta ee Stadium Mogdisho, Cisbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka ee Banaadir iyo Tiyaartarka Qaranka, kuwaas oo marqaati u ah xiriirka Saaxiibtinimo ee Soomaaliya iyo Shiinaha,” ayuu yiri Safiirka Shiinaha.
Sidoo kale, Dowladda Shiinaha waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay taageerada Soomaaliya, iyadoo mashaariic horumarineed ka fulisay Soomaaliya.
Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Qin Jian ayaa hoosta ka xariiqay in Dowladiisa si adag u taageertay nabada, horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, isagoona hadalkiisa intaa ku daray iney kaalin firfircoon ka qaateen taageerada arrimaha bini-adanimada Soomaaliya sida cunada, nafaqada,bixinta Teendhooyin, mara Kaneeco iyo bixinta lacagaha gargaarka deg deg ah ee loo baahan yahay.
Wasaaradda Batroolka oo heshiis la saxiixatay Shirkadaha Shell iyo Exxon Mobil oo qaabilsan Shidaalka
Hooyo Suldaano oo ka mid aheyd dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Tiyaatarka hortiisa